Ireo fiasa izay tsy maintsy ananan'ny rafitra fitantanana atiny rehetra ho an'ny fanatsarana ny motera fikarohana | Martech Zone
Nihaona tamin'ny mpanjifa iray izay niady tamin'ny laharan'ny milina fikarohana ahy aho. Rehefa nandinika ny azy ireo aho Content Management System (CMS), nitady fomba fanao faran'izay tsara tsy hitako aho. Alohan'ny hanomezako lisitry ny fanamarinana hanamarinana amin'ny mpamatsy CMS anao, dia tokony holazaiko aloha fa TSY misy antony tsy tokony hisian'ny rafitra fitantanana atiny intsony ny orinasa iray.
CMS dia hanome anao na ny ekipa marketing anao hanova ny tranokalanao amin'ny sidina fa tsy mila mpamorona tranonkala. Ny antony hafa a Content Management System Ny filàna iray dia ny ankamaroan'izy ireo mandeha ho azy fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanatsarana ny tranokalanao.
Ireo purista SEO dia mety mifamaly amin'ny sasany amin'ireo fiasa resahiko eto satria mety tsy manondro mivantana ny laharana izy ireo. Miady hevitra amin'ny Search Engine Guru aho na izany aza, ny laharan'ny milina fikarohana dia mikasika ny traikefan'ny mpampiasa fa tsy ny algorithman'ny motera fikarohana. Arakaraka ny hamoronanao ny tranokalanao no hampiasainao, hampiasa vola amin'ny atiny lehibe, hampiroborobo izany atiny izany, ary hifaneraseranao amin'ireo mpampiasa anao… arakaraka ny ahombiazan'ny tranokalanao amin'ny laharana fikarohana organik.
Ny mekanika an'ny ahoana no ahitan'ny mpikaroka fikarohana, ny index na ny laharanaNy tranokalanao dia tsy niova firy nandritra ny taona maro… fa ny fahaizana manintona mpitsidika, asaivo mizara ny atiny ireo mpitsidika ireo, ary efa niova ny motera fikarohana. SEO tsara dia traikefa nahafinaritra an'ny mpampiasa… Ary ny rafitra fitantanana votoaty dia manakiana ny fahombiazanao.
Fitaovana SEO fitantanana atiny
rehetra Content Management System tokony hanana na hampiharina miaraka amin'ireto endri-javatra manaraka ireto:
Famerenana: Famerenana sy SEO? Eny… raha very ny tranokalanao sy ny atiny anao, dia sarotra be ny manome laharana. Ny fananana backup matanjaka miaraka amina backups fanampiny ary koa amin'ny fangatahana, backup ary famerenana amin'ny laoniny dia tena manampy tokoa.
Mofomamy: Raha manana fampahalalana marobe voarindra hiarkiatika ianao, ny fahafahan'ny mpampiasa (sy ny motera fikarohana) hahatakatra fa ny ambaratongam-pahefana dia manakiana amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny atiny ary manondro azy tsara.
Fampandrenesana an'ny Browser: Chrome sy Safari dia manolotra fampandrenesana mifangaro miaraka amin'ny rafitra miasa. Rehefa misy olona tonga eo amin'ny tranokalanao dia anontaniana izy ireo raha te hampandrenesina izy ireo rehefa nohavaozina ny atiny. Ny fampandrenesana dia mitazona ny mpitsidika hiverina!
Caching: Isaky ny angatahina takelaka iray, ny fikarohana database dia mandray ny atiny ary mampiaraka ny pejy. Mila loharano sy fotoana… fotoana maharary ny fanatsarana motera fikarohana anao io. Ny fahazoana CMS na mpampiantrano manana fahaiza-manao amin'ny cache dia lakile hanafainganana ny tranokalanao sy hampihena ny loharano takiana amin'ny mpizara anao. Ny cache dia afaka manampy anao ihany koa rehefa mahazo tampoka ny fifamoivoizana… ny pejy cache dia mora omena kokoa noho ny pejy tsy nasiana cache. Noho izany dia afaka mahazo mpitsidika betsaka kokoa noho izay azonao atao ianao raha tsy manao «cache».
URLs Canonical: Indraindray ireo tranonkala dia avoaka miaraka amina pejy tokana misy làlana maro. Ohatra tsotra dia mety manana ny fonenanao http://yourdomain.com or http://yourdomain.com/default.aspx. Ireo lalana roa mankany amin'ny pejy ireo dia mety hampisaraka ny lanjan'ireo rohy miditra izay tsy misy laharana araka ny tokony ho izy ny pejinao. Ny URL canonical dia sombin-kaody miafina HTML izay milaza amin'ireo motera fikarohana hoe URL tokony hampiharin'izy ireo ilay rohy.
Comments: Manampy lanja ny atiny ny hevitra. Aza hadino izany fa azonao atao ny manonon-tena amin'ny fanehoan-kevitra satria misy taonina bot botsika eo amin'ny sehatra CMS spamming hanandrana hamorona rohy.
Tonian-dahatsoratry ny atiny: Tonian-dahatsoratry ny atiny izay mamela ny H1, H2, H3, ny matevina ary ny sora-mandry mifono soratra. Ny famoahana sary dia tokony hamela ny singa ALT hovaina. Ny famoahana marika amin'ny vatofantsika dia tokony hamela fanovana singa TITLE. Mampalahelo fa firy ny rafitra CMS no tsy manana mpamoaka lahatsoratra afa-po!
Content Delivery Network: A fifandraisana an-tariby dia tambajotram-solosaina misy ny jeografika izay mitahiry loharanon-karena tsy mijanona eo an-toerana… mamela ny pejy hanavesatra haingana kokoa. Ary koa, rehefa ampiharina ny CDN, ny fangatahan'ny pejyo dia afaka mameno ny fananana avy amin'ny mpizara tranonkalanao SY ny CDN-nao amin'ny fotoana iray. Izany dia mampihena ny enta-mavesatra amin'ny mpizara tranonkala anao ary mampitombo ny hafainganan'ireo pejinao.
Fampiantranoana avo lenta: Haingam-pandeha no zava-drehetra raha ny milina fikarohana. Raha manandrana mitahiry vola vitsivitsy amin'ny fampiantranoana ianao, dia manimba tanteraka ny fahafahanao mahazo index na milahatra tsara amin'ny motera fikarohana.
Fanamafisana ny sary: Ny sary dia aondrana any anaty rakitra lehibe tsy ilaina. Ny fampidirana amina fitaovana famatrarana sary hampihenana ny haben'ny rakitra sy hanovana habe ny sary ho an'ny fijerena optimum dia zava-dehibe.
Integrations: Ny fahaizana manitatra ny fiasan'ny atiny miaraka amina firaka mitarika, marketing amin'ny mailaka, automatisation marketing, marketing amin'ny haino aman-jery sosialy, ary sehatra hafa izay manampy anao hanana sy hihazona ny fifamoivoizana.
Kamo mamoaka sary: Ny motera fikarohana dia tia atiny lava amin'ny haino aman-jery maro. Fa ny famoahana sary dia mety hampiadana ny tranokalanao. Ny famoahana kamo dia fitaovana entina mamoaka sary raha mihodina ny pejy. Io dia mamela ny pejy hanafaka haingana kokoa, avy eo asehoy fotsiny ny sary rehefa tonga eo amin'ny toerany ny mpampiasa.
Fitantanana fitarihana: Aorian'ny fahitan'ny vinavina ny lahatsoratrao, ahoana no ifandraisan'izy ireo aminao? Ilaina ny manana endrika endrika sy tahiry hisamborana fitarihana.
Famaritana Meta: Ny motera fikarohana dia mazàna maka ny famaritana meta ny pejy iray ary mampiseho izany eo ambanin'ny lohateny sy ny rohy ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana. Rehefa tsy misy famaritana meta dia mety misintona lahatsoratra an-tsokosoko avy amin'ny pejy ny motera fikarohana… fomba fanao iray izay hampihena ny tahan'ny click-through -n'ny rohy amin'ny motera fikarohana ary mety handratra ny fanondroana ny pejy anao aza. Ny CMS anao dia tokony hamela anao hanova ny famaritana meta amin'ny pejy tsirairay amin'ilay tranokala.
Mobile: Ny fikarohana finday dia mipoaka amin'ny fampiasana azy satria ny smartphone sy ny tablette dia raisina manerana. Raha tsy mamela tranokala mamaly mampiasa ny HTML5 sy CSS3 (safidy tsara indrindra)… ny CMS anao na farafaharatsiny fanodinana ny modely finday voatsara tsara, dia tsy ho voasokajy ho an'ny karoka finday ianao. Ankoatr'izay, endrika finday vaovao toy ny AMP afaka mahazo ny atiny milahatra tsara ho an'ny karoka vita amin'ny fitaovan'ny Google.
Ping: Rehefa mamoaka ny atiny ianao, ny CMS dia tokony mandefa ny tranokalanao ho any Google sy Bing tsy misy fidirana an-tsehatra. Hanomboka mandady avy ao amin'ny motera fikarohana izy io ary hahazo ny atiny vaovao (na novaina) averina alain'ny motera fikarohana. Ny motera CMS be pitsiny aza dia hametaka ny motera fikarohana rehefa mandahatra fotoana atiny.
ny fihodinana: Matetika ny orinasa dia manova sy manangana ny tranokalany. Ny olana amin'izany dia mety mbola manondro URL mankany amin'ny pejy tsy misy ny motera fikarohana. Ny CMS anao dia tokony hamela anao hitodika amin'ny fifamoivoizana amin'ny pejy vaovao ary hamindra ny motera fikarohana ao koa mba hahitan'izy ireo sy hanondroany ny pejy vaovao.
Snippets manan-karena: Ny motera fikarohana dia manolotra endrika microdata ho an'ny pagination sy famantarana mofomamy ao anaty tranokalanao. Matetika, ity mari-pamantarana ity dia mila ampiharina ao anatin'ny lohahevitra apetrakao miaraka amin'ny CMS na mety hahita modules mamela anao hampihatra azy mora kokoa. Sombin-javatra manan-karena toy ny Schema for Google sy OpenGraph ho an'ny Facebook manatsara ny valin'ny motera fikarohana ary mizara ary handroaka mpitsidika bebe kokoa tsindrio.
robots.txt: Raha mankany amin'ny faka (adiresy base) ao amin'ny fonenanao ianao dia ampio robots.txt amin'ny adiresy. Ohatra: http://yourdomain.com/robots.txt Misy fisie ve ao? Ny rakitra robots.txt dia rakitra fahazoan-dàlana fototra izay milaza amin'ny bot / spider / crawler an'ny motera fikarohana izay lahatahiry tsy raharahina ary inona ny lahatahiry handady. Ho fanampin'izay, afaka manampy rohy mankamin'ny sitemap anao ianao ao!
RSS Feeds: Raha manana fananana hafa ianao ary te hampahafantatra ny bilaoginao, dia ilaina ny fanananao feed RSS hamoahana mora foana ny sombintsombiny na lohateny amin'ny tranonkala ivelany.
Mitady: Ny fahaizana mikaroka anatiny sy mampiseho valiny mifandraika dia tsy maintsy ilaina amin'ny mpampiasa ny mahita ny vaovao tadiavin'izy ireo. Ireo pejy valin'ny motera fikarohana dia matetika hanome sehatra faharoa ho an'ireo mpampiasa fikarohana hikarohana ao anaty tranokala ihany koa!
Security: Ny maodely fiarovana matanjaka sy ny fampiantranoana azo antoka dia hiaro ny tranokalanao tsy hanafika na hametraka kaody ratsy eo amboniny. Raha mahazo kaody ratsy eo aminy ny tranokalanao, dia hanafoana ny index anao i Google ary hampandre anao amin'ny Webmasters. Zava-dehibe ny fanananao karazana fanaraha-maso na endri-piarovana tafiditra ao amin'ny CMS anao na amin'ny fonosanao fampiantranoana amin'izao fotoana izao.
Famoahana ara-tsosialy: Ny fahaizana mamoaka ho azy ny atiny misy lohateny sy sary nohamarinina dia hizara ny atiny. Ny atiny nizara dia mitarika ny firesahana ny atiny. Ny firesahana dia miteraka rohy. Ary ny rohy dia mitarika amin'ny laharana. Facebook dia manangana lahatsoratra Instant, endrika hamoahana lahatsoratra manontolo mivantana amin'ny pejin'ny marikao.
Syndication: Na dia lavo amoron-dalana aza ny olona mamaky lahatsoratra ao amin'ny mpamaky RSS manoloana ny fizarana ara-tsosialy, dia mbola manan-danja ihany ny fahafaha-manao syndicate ny atiny amin'ny tranokala sy fitaovana.
Tagging: Ny motera fikarohana dia mazàna tsy miraharaha ny tenifototra meta ho an'ny teny lakile, fa ny fanondroana dia mety mbola ho mora raisina - raha tsy misy zavatra hafa tokony hotadidina ao an-tsaina ireo teny lakolosy kendrenao isaky ny pejy. Matetika ny tag dia manampy amin'ny fitadiavana sy fampisehoana lahatsoratra mifandraika sy valin'ny karoka ao anatin'ny tranokalanao.
Mpanonta modely: Mpanonta template madiodio izay misoroka ny fampiasana latabatra HTML ary mamela HTML madio madio sy fisie CSS mifangaro hanefitra tsara ny pejy. Tokony ho afaka hahita sy hametaka modely ianao nefa tsy mila manao fivoarana lehibe amin'ny tranokalanao sady mitazona ny atiny tsy misy olana.
XML Sitemaps: Ny sitemap voaforona mavitrika dia singa fototra iray izay manome ny motera fikarohana a Map ny toerana misy ny atiny, ny maha-zava-dehibe azy, ary ny fotoana nanovana azy farany. Raha manana tranokala lehibe ianao dia tokony hofehezina ireo sitemapanao. Raha mihoatra ny 1Mb ny sitemap dia tokony hamorona sitemap marobe ny CMS anao ary avy eo rojo miaraka aminy mba hahafahan'ny motera fikarohana mamaky azy rehetra.
Handeha tongotra aman-tongotra eto aho ary hambarako; raha miampanga anao ny masoivohonao noho ny fanavaozana ny atiny ary tsy manana fidirana amin'ny rafitra fitantanana votoaty hanatsarana ny tranokalanao ianao… tonga ny fotoana handaoana an'io maso io ary hitanao fa vaovao ianao miaraka amina mafy rafitra fitantanana atiny. Indraindray ny masoivoho dia mamolavola tranonkala sarotra izay mijanona ary mitaky anao hanova ny fanovana atiny arak'izay ilainao azy ireo… tsy azo ekena.
Tags: ampcms seomicrodatasnippets manankarenarobots.txtfikarohana OptimizationSEOlisitra fanamarihana seoSitemapwordpress seositemap xml
Mampiasa An'io Teny io Ianao "Creative"…
13 Novambra 2010 à 12:37
Inona? Tsy misy soso-kevitra manokana? Ahoana no ahafantaran'ny orinasa iray hoe inona ny CMS ilainy na ny hamafin'ny vahaolana? Tsara ny lisitra, Andriamatoa Karr.
Mar 20, 2011 amin'ny 4: 28 AM
Tiako ity lisitra ity! Ity izao no torolalako rehefa manomboka miantsena CMS aho. Efa nanao ny famolavolana tranonkala rehetra aho, saingy te hampihena ny fotoana laniko hanoratana kaody mba ahafahako mampitombo ny fotoana laniko amin'ny fandrindrana ny tranokala. Manana tolo-kevitra momba ny rafitra mahazatra DIY (WordPress, Joomla, sns) ve ianao?
8 Okt 2011 amin'ny 6:43 PM
Miasa io URL io, vahiny. Na izany aza, ny CMS tsara dia handefa / handefa ny sari-taninao isaky ny mamoaka votoaty ianao!
8 Okt 2011 amin'ny 6:45 PM
Ny hany zavatra ampiako amin'ity izao dia ny hoe ny sehatra fitorahana bilaogy dia tokony hampiseho araka ny tokony ho izy ny marika rel = "mpanoratra" ary hamela ny fifandraisana amin'ny Google Profile mba hisehoan'ny sarin'ny mpanoratra amin'ny valin'ny fikarohana.
8 Okt 2011 amin'ny 10:38 PM
Manaiky tanteraka - Tsy misy orinasa tokony ho CMSless.